बामदेवको रहर ओलीको बाध्यता ! | Sindhuli Saugat
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ असोज २३ गते मंगलवार काठमाडौं
काठमाडौंको मौसम चिसिदैछ । आम मानिसहरु शरिर तातो बनाउने कपडाको जोगाड गर्दैछन् । नेपालीहरुको महान चाडवाडहरु दैलोमा आईपुग्दैछन् । गत जेठ ३ गते जन्माइएको शिशु नेकपा विरामी पर्दैछ । नेकपा सरकार र नेतृत्वको लोकप्रियता विस्तारै घट्दैछ । तमाम विषम परिस्थितीकोबीच काठमाडौं मात्र हैन पुरै मुलुकको राजनीति अकस्मात तात्ने कारण काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बन्दैछ ।
नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धर कमरेड बामदेवको निम्ती काठमाडौं ७ खाली गर्न तयार भएसँगै अनेकौं अडकलवाजी सुरु भईसकेको छ । अथक प्रयास गर्दा पनि सवैतीर असफलता मात्र हात लागेको समय आखिर कसरी र किन ? रामवीर मानन्धर कमरेड वामदेवको निम्ती ‘शहिद’ हुन तयार भए । आम मानिसको निम्ती रुचीको विषय बन्दैछ ।
किन रोजियो काठमाडौं ?
माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीको एकताको शुत्रधार मानिएका दुई हस्तीहरु कमरेड बामदेव र नारायणकाजी देशैभर बाम लहर आएको निर्वाचनमा पराजीत हुन पुगे । नारायणकाजीले निर्वाचन पराजयमा त्यति गुनासो नगरे पनि बामदेव कमरेडले आफुलाई अन्तरघात गरिएको मान्दै आइरहेका छन् । बर्दिया जिल्लाबाट झिनो मत अन्तरले पराजीत गौतम ततपश्चात संसदमा छिर्न डोल्पा देखी धनकुटा,प्युठानदेखी रुकुम,रोल्पादेखी बाँकेसम्म नजर र मन लगाउँदा पनि असफलता शिवाय केही हात लागेन । माधव वा ओली तीर जता ढल्के पनि उतै पल्लाभारी हुने पूर्व एमालेमा गौतमको शक्तिलाई उचित सम्मान दिने सर्त सहित ओलीले आफ्नो कित्तामा लगेका थिए । विगतको भद्र सहमतीलाई तोड्दै आफुलाई नेता ओलीले प्रयोग मात्र गरेको गुनासोे आफ्ना समर्थकबीच पटक पटक चुहाएका थिए । बर्दियाबाट पराजीत भईसकेपछि गौतम आफ्नो उमेरका कारण राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा पछारिने संकेत पछि ठुलो अन्तरद्वन्दमा फस्दै थिए ।
दुई अध्यक्षको मिलिमतोमा पेलिदै गएका कारण माधव नेपालको असन्तुष्टि जागेको समय ‘फलाम गरम छ’ । हथौडा मारि हालौं भन्दैं बानेश्वर भेलामा उपस्थित हुने गौतम कला अनन्त ओलीको दोस्रो घेरालाई घोच्ने कारण बनेरै छोड्यो । बामदेवको उचित सम्मान र सहयोग विना दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको लोकप्रियतामा वर्तमान शक्ति स्थीर रहन नसक्ने निचोड पछि रणनैतिक ढंगले काठमाडौं ७ खाली गराइएको चर्चा ब्यापक बन्दैछ ।
गौतमलाई भट्टराई नबनाईयोस !
काठमाडौं नगरपालिकाका मेयर र ओली सरकार दुवै काठमाडौंवासी जनताको नजरमा जस्ट पास देखिएको समय काठमाडौं ७ खालि गरिनुलाई रणनीतिक मानिदैछ ।
वि.स. २०४८ सालको निर्वाचनमा अत्यन्त लोकप्रिय तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौं १ बाट पराजयको नमिठो स्वाद चाख्न बाध्य भए ।
उनै भट्टराईलाई मदन भण्डारीको मृत्यु पछि सोही क्षेत्रमा विद्यादेवी भण्डारीसँग दोस्रो पटक पराजयको स्वाद चखाइयो । ततपश्चात सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति गिरिजाको हातमा पुगेको कमरेड बामदेव आफैंले देखे भोगेका र बुझेका हुन् । वर्तमान समयमा लोकप्रियता गुमाउदै गरेको ओली सरकारको कारण काठमाडौं ७ बाट कमरेड बामदेव निर्वाचनमा लड्नु फलामको चिउरा चपाए सरह मानिदैछ । गत निर्वाचनमा १८ हजार १ सय २ मत ल्याएर एमाले विजयी भएको क्षेत्रमा राप्रपाले झण्डै ८ हजारले हारे पनि विवेकशिल साझाले ५ हजार भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको क्षेत्र रोजिनु आफैंमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइदैछ । वर्तमान समयमा बामदेवले जिते हामीले जितायौं भन्ने र हारे वामदेव कै कारणले भन्दै उनलाई भट्टराई बनाउने खेल सुरु भइसकेको राजनैतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
बामदेवलाई जिताए के हुन्छ ?
कमरेड ओली, प्रचण्ड र विष्णु पौडेलले जितेको बाँकीले जितको महशुस गर्न नसकेको पूर्व माओवादी र एमाले एकता विरामी पर्न थालीसकेको छ । सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, नीति, नियम भन्दा अन्तर विरोधमा खेल्दै पार्टी र राजकीय सुविधामा रमाउने शिशु नेकपाका नेताहरु आफु कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बाहेक अरु सोचेको देखिएन । लामो समय देखी रोगी शरिर लिएर हिडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गर्दै व्यक्तिगत फाईदा लुटिरहेका शक्ति र व्यक्तिलाई आगामी दिन कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चिन्तामा कमरेड ओलीको स्वास्थ्यलाई हेरिदैछ । बामदेवलाई जोगान नसकिए तत्काल खाइपाई आएको सुविधा धरापमा पर्ने, वामदेवलाई जोगाउन सकिए भविष्यमा शक्तिमा रहिरहन पाउने सुक्ष्म विश्लेषणपछि चालिएको कदमको रुपमा काठमाडौं ७ लाई हेरिएको छ ।
नेकपाको आगामी राजनीति केही समय बामदेवको जित वा हारमा केन्द्रित हुने करिव तय भइसकेको छ । बामदेव मार्फत ओली गुटको शक्ति स्थापीत गर्दै नेकपा भित्र टिक्ने खेल आगामी महाधिवेशन लक्षित हुने आँकलन गरिएको छ । अदालत प्रशासन,सुरक्षा निकायले समेत टेर्न छोडको दुई तिहाईको सरकारलाई बामदेव समेतले माया मारे ओली झनै कमजोर हुने आँकलन पछि बोकिएका कमरेड बामदेव नेकपाको तेस्रो शक्ति वा पहिलो शक्ति के बन्ने छन् ? केही समय कुर्नु पर्नेछ ।नेपालपाटी बाट ।
पछिल्लाे - गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण अन्यौलमा
अघिल्लाे - ‘पराजित वामदेवलाई सांसद बनाउनु जनमतको अपमान’